Services & Facilities | စိမ်းလဲ့တင်
+951- 3335331~4, +959-8723123~4
Sane Let Tin
Sane Let Tin Zoo
Sane Let Tin Activities
Kaut Gon Cave
Kyaik Htee Saung
Kyaik Ka Lon Pon
Thin Baw Oo
ဇိမ်စံအိပ်ခန်း (၄) ခန်း။
ဧည့်ခန်းပါဟုိုတယ်ခန်း (၂) ခန်း။
သုံးပုိုင်ခွင့်တည်းခုိုအိမ် (၃) အိမ်။
(၂၄)နာရီ လုံခြုံရေး နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိရေး။
အခန်းအတွင်း ဝုိုင်ဖုိုင်း ဆက်သွယ်မှုရရှိရေး။
ဟုိုတယ် စားသောက်ဆုိုင်သည် ခပ်နုနုအလင်းရောင်နှင့် လွတ်လပ်စွာရရှိသောလေတုို့ဖြင့် တည်နေရာကုို လှပတင့်တယ်စွာတည်ဆောက်ထားပါသည်။ အရသာကောင်းမွန်သော မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထုိုင်း နှင့် ဥရောပ စားသောက်ဖွယ်ရာ တုို့ကို နေ့တုိုင်းစားသောက်သုံးဆောင်နုိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ အများဆုံးသော အသီးအနှံ အသီးအရွက်ကုန်ကြမ်းများမှာ ဤစိမ်းလဲ့တင် အပန်းဖြေစခန်း၏သဘာဝမြေသြဇာသုံးသစ်သီးခြံဖြစ်ပြီး အသားငါးများအနေဖြင့် စစ်တောင်းမြစ်၏ အနီးအနားတွင်ရှိသော ပြည်တွင်းငါးဖမ်းလှေများမှ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသော သီးသန့်ပင်လယ်အစာအစားများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တုို့၏ စားသောက်ဖွယ်ရာများသည် သန့်ရှင်းမူ ရှိပြီး လူကြီးမင်းတုို့အနေဖြင့် ဒေသအတွင်း တေးသီးချင်းဖျော်ဖြေသူဖြစ်သော မယ်ဒလင်တီးကျွမ်းကျင်သူက သူ၏တစ်ကုိုယ်တော်တေးသီးချင်း နှင့် ကုိုယ်ပုိုင်တီးလုံးများဖြင့် သီဆုိုဖျော်ဖြေတာကုို နားထောင်ခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂၄)နာရီ ဖွင့်သော စားသောက်ဆုိုင်။
အဝေးပြေးခရီးစဉ်ယာဉ်များနှင့် ဘတ်(စ်)ကားများဖြင့် ကျိုက်ထီးရုိုး” စေတီတော်မြတ်ကြီး ကိုလာရောက်ဖူးမျှော်ကြသည့် ခရီးသည်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော ဤ“စိမ်းလဲ့တင်” အပန်းဖြေစခန်း၏စားသောက်ဆုိုင်သည် အဝစားဖွယ်ရာ မြန်မာဟင်းမျိုးစုံပဒေသာနှင့် အဆာပြေစားသုံးရာ သရေစာများပံ့ပုိုးဆောက်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤ“စိမ်းလဲ့တင်” အပန်းဖြေစခန်းတွင် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆုိုင်လည်းရှိပါသည်။ ယင်းဆုိုင်တွင်လက်ဖြင့်ထွင်းထုသော ပန်းပုပစ္စည်းများ၊ ဒေသသုံးအစာပြေစားဖွယ်ရာများနှင့် အားလူးကပ်ကြော်၊ ရေချိုငါးပိအစရှိသည့် မြန်မာနုိုင်ငံ ၏ ဒေသရုိုးရာ စားဖွယ်ရာများနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
24hours Express Restaurant
Ideally for travellers with coaches and buses to visit Golden Rock Pagoda, Sane Let Tin also offers one stop service for varieties Myanmar dishes and snacks for dining and tea break. There is alsoasouvenir shop where it offers variety of products from hand carved wood, local snacks and the region specific sweet Myanmar such as Arr Luu Kat Kyaw (thick fried chips), Yay Cho Nga Pi (Myanmar famous fish paste) to Myanmar traditional costumes and gifts.
Beautifully designed, with soft lighting and an open-air feel. Offering all day dining with delicious Myanmar, Chinese, Thai and European cuisine. Most of the ingredients are from Sane Let Tin organic orchard with the specially being freshly caught seafood from local fishing boats near Sit Taung River. Our dinners with pamper you with the local entertainer, the mandolinist with his finest solo music and tunes.
Sane Let Tin resort is founded by local Myanmar family and started the family business asaprivate orchard garden in 2000. Daw Than Than Swe,abotanist and the founder of Sane Let Tin, purchased the 50-acre plot of land in 2000 with the intention of developing the land asafruit plantation. read more..
Address: Sein Let Tin Resort, Thaton District, Mon, Republic of the Union of Myanmar
Phone: +951- 3335331~4, +959-8723123~4
Copyright © 2015 Sane Let Tin Resort. Ltd. All Rights Reserved. Powered by Triple Luck.